Nabad Suggida Gobolka Gedo oo soo bandhigtay rag Shabaab ah iyo hubkii ay wateen – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Nabad Suggida Maamulka Jubbaland ee ka howlgala Gobolka Gedo, ayaa soo bandhigay labo ruux oo sida ay sheegeen ka tirsan Ururka Al Shabaab iyo hubkii ay wateen, kuwaasi oo ay ku soo qabteen howlgal ciidamada ay ka sameeyeen gudaha Degmada Baled Xaawo.
Taliyaha ciidamada Nabad Suggida Maamulka Jubbaland ee Gobolka Gedo Cali Abshir Xasan Deer ayaa u sheegay Saxaafadda labada ruux ee dhalinyarada ah ciidamada inay ka soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen gudaha Baled Xaawo.
Wuxuu sheegay ciidamada inay soo qabteen hubkii ay wateen labadaasi dhalinyarada ah, xilli qarax bam ay ku weerareen guri uu degan yahay Nabadoon ka mid ahaa Ergadii soo dooratay Xildhibaanada, kaasi oo lagu magacaabo Nabadoon Cabdi Aadan.
Taliyaha ayaa sheegay ragga ay soo qabteen ciidamada Nabad Suggida Jubbaland inay ku soo qabteen labo bistooladood oo kala ah Makaaruf iyo Teete, kuwaasi oo ay u isticmaalayeen dilalka qorsheysan ee loogu soo diray inay laayaan Odayaasha Dhaqanka.
“Ilaahey ayaa noo suurageliyay in aan gacanta ku soo dhigno nimankaan cadowga ah oo bam ku tuuray guri uu degan yahay nin Nabadoon ahaa oo ka mid ahaa kuwii soo doortay Xildhibaanada, waxa ay wateen raggaan qalabkaan Bistooladaha ah oo ay rabeen inay ku laayaan Odayaasha Dhaqanka Gobolka Gedo, qorshahooda wuxuu ahaa inay gabi ahaanba laayaan Odayaashii tagay Magaalada Kismaayo.” Ayuu yiri Taliyaha Nabad Suggida Gobolka Gedo.
Raggaan ayaa iminka lagu haayaa xarun ciidamada Nabad Suggida Jubbaland ay ku leeyihiin Degmada Baled Xaawo ee Gobolka Gedo, waxaana ku socda Baaritaan dheeri ah, iyadoo la qorsheynaayo in loo gudbiyo maxkamada ciidamada Jubbaland.
Dhalinyaro u adeegta Al Shabaab oo fekradaha laga qalday ayaa ka hawlgala Gobolada dalka Somaliya, kuwaasi oo beegsada cid kasta oo xiriir la leh dowladda Somaliya iyo Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Soomaalida degan Finland oo ka dhex muuqda doorashada golayaasha deegaanka ee dalkaas